Celebrity – Page2– Shwe Naung
အတွင်းသားလေးတွေ မြင်သာအောင် ဆက်ဆီကျကျ အမိုက်စား ပိုစ့်ဆန်ဆန်လေးတွေ ပေးနေတြ့ အဆိုတော် မေရဲ့ ပုံလေးများ……..
N N | January 20, 2022
အဆိုတော် မေကတော့ ချစ်စရာ ကောင်းလွန်းတဲ့ အပြုံးလေး တွေကို ပိုင်ဆိုင် ထားပြီး အနုပညာ လောကမှာ နေရာတစ်ခုကို ရယူ ထားနိုင်ခဲ့တဲ့ ပြည်သူ ချစ် အနုပညာ ရှင်တစ်ယောက် ပဲ့ဖြစ် ပါ တယ်။ အောင်မြင်လျက် ရှိနေတဲ့ အနုပညာရှင် တွေထဲမှာ တစ်ယောက် အပါအဝင်ဖြစ်တဲ့ သူမ ကတော့
ထပ်ခါခါ ပြန်ကြည်ချင် လောက်အောင် ဆက်ဆီကျကျ လှပနေတဲ့ ခင်သဇင်ရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးများ………
ချစ် ပရိသတ် ကြီးရေ….. လေယာဉ်မယ် ဘဝ ကနေ အနု ပညာ လမ်းကြောင်း ပေါ် ကို လျှောက်လှမ်း လာခဲ့တဲ့ သူလေး ဖြစ်တဲ့ သရုပ်ဆောင် မင်းသမီး ချောလေး ခင်သဇင်ကို သိကြမယ် ထင်ပါတယ် နော်။ သူမ ဟာ ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားကြီး တွေမှာ ပါဝင်
သူမရဲ့ ရွှေရင်မွှာလေးတွေကို ပရိသတ်တွေ မြင်အောင် ထုတ်ပြလိုက်တဲ့ မရမ်ဆိုင်းနူးရဲ့ အမိုက်စား ဗီဒီယိုလေး………
သွယ်လျ တဲ့ အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ် လေးကို ပိုင်ဆိုင် ထားတဲ့ ဆက်ဆီ မော်ဒယ် မရမ်ဆိုင်းနု ကို သိကြမယ် ထင်ပါ တယ်။ ဆွဲမက်ဖွယ် ရင်သပ် ရှုမောစရာ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေး တွေနဲ့ ပုရိသ တွေရဲ့ ရင်ကို ဆွဲဆောင် ညို့ယူ ထားတဲ့ အလန်းစား မော်ဒယ်
ကိတ်လွန်းလှတဲ့ ကိုယ်လုံးလေးကို ပရိသတ်တွေ မြင်သာအောင် ချပြလိုက်တဲ့ မျက်ဝန်းရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးများ………
မို့မောက် ပြည့်တင်း နေတဲ့ လုံးကြီးပေါက် ခန္ဓာကိုယ် ကောက်ကြောင်း အလှ တွေကို ပိုင်ဆိုင် ထားတဲ့ ဆက်ဆီ မော်ဒယ်လ် မျက်ဝန်း ကို သိကြမယ် ထင်ပါတယ် နော်။ မော်ဒယ်လ် လောကကို ဝင်ရောက်တာ မကြာသေး ပင်မဲ့ ပရိသတ် အများ အပြားရဲ့ အားပေး ဝန်းရံမှုကို တဖြည်းဖြည်း
စမတ်ကျ တဲ့ အရပ် အမောင်း အပြင် ဆွဲဆောင်မှု ရှိတဲ့ အလှတရား တွေ ကို ပိုင်ဆိုင် ထားပြီး ယောကျာ်းလေး ပရိသတ် တွေရဲ့ အသည်းတွေကို ခြွေချ ထားနိုင် တဲ့ သူက တော့ မင်းသမီး ချောလေး ဖူးပွင့်သခင် ပဲ ဖြစ်ပါ တယ်။ သူမ
ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ မျက်နှာ‌လေးနဲ့ အမိုက်စား‌ ကောက်ကြောင်းကို ပိုင်ဆိုင် ထားတဲ့ နန်းအမရာရဲ့ အလန်းစား ဗီဒီယိုလေး……..
N N | January 19, 2022
လူမှု ကွန်ယက် စာမျက်နှာ မှာ နာမည်ကြီး နေသူလေး နန်းအမရာ ကတော့ ချစ်စရာ ကောင်းတဲ့ သူ တစ်ယောက် ဖြစ်သလို မော်ဒယ်လောက မှာလည်း နာမည်ကြီး တဲ့ သူ တစ်ယောက် ဖြစ်ပါ တယ်။ ဆက်ဆီ မော်ဒယ် မလေး တစ်ဦး ဖြစ်တဲ့ နန်းအမရာ က
ရင်ဖိုစရာ ကောက်ကြောင်းအလှအပတွေနဲ့ ဆွဲဆောင်အားပြင်းပြင်း ညို့ယူဖမ်းစား ထားတဲ့ မေပန်းချီရဲ့ အမိုက်စား ဗီဒီယိုလေး………
ပရိတ်သတ် ကြီးရေ မေပန်းချီ ကတော့ အမိုက်စား ခန္တာကိုယ် ကောက်ကြောင်း အလှ တွေနဲ့ တည်ငြိမ် ရင့်ကျက်တဲ့ မျက်နှာလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ သူမ ဟာ နာမည်ရ မင်းသမီးတွေ ထဲက တစ်လက် ဆိုလည်း မမှားပါ ဘူးနော်။ ဗီဒီယို တွေ ခေတ်စား ခဲ့တဲ့ ကာလ မှာလည်း
သွယ်လျပြေပြစ်တဲ့ ဆက်ဆီကျကျ ကိုယ်လုံးလေးကို အမိုက်စား ပိုစ့်တွေ ပေးနေတဲ့ မော်ဒယ်လ် အယ်လာရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးများ…….
လုံးကြီး ပေါက် ခန္ဓာကိုယ် ကောက်ကြောင်း အလှတွေ ကို ပိုင်ဆိုင် ထားတဲ့ မော်ဒယ်လ် အယ်လာ ကို သိကြမယ် ထင်ပါ တယ်။ မော်ဒယ်လ်လောက ကို ဝင်ရောက်တာ မကြာသေး ပေမယ့် ပရိသတ် အများအပြား ရဲ့ အားပေး ဝန်းရံမှုကို အခိုင်အမာ ရရှိ လာတဲ့ မော်ဒယ်
မပေါ်တပေါ် ပိုစ့်အမိုက်စားတွေ ပေးပီး ဆက်ဆီကျကျ ဆွဲဆောင်မှုရှိနေတဲ့ ခေးကြီးလုရဲ့ အလန်းစား ပုံရိပ်လေးများ……….
အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ် ကောက်ကြောင်းအလှတွေနဲ့ ဆွဲဆောင်မှုရှိရှိ လှနေတဲ့ သူလေးကတော့ ပုရိသတို့ရဲ့ အသည်းကျော်လေး ခေးကြီးလုလုအောင် ပါနော်။ သူမဟာ single mother တစ်ယောက်အဖြစ်နဲ့ လည်း အောင်မြင်စွာ ရပ်တည်နေနိုင်သူလေးဖြစ်ပြီးတော့ တစ်နေ့တစ်ခြား လဲ ပိုပိုပြီး လှသွေးကြွယ်လာသူလေး ဖြစ်ပါတယ်။ ညို့အားပြင်းတဲ့ ပုံရိပ်အလန်းလေးတွေကို အမြဲလိုလို တင်ဆက်ပေးလေ့ရှိပြီး အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေအနေနဲ့လည်း ကြော်ငြာများလည်း
အတွင်းဝတ်လေး အောက်က မိုမောက်လျှံထွက်နေတဲ့ ဆက်ဆီကျကျ အလှတရားတွေ ပေါ်လွင်နေတဲ့ စတယ်လာရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးများ…….
သွယ်လျ တဲ့ အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ် လေးကို ပိုင်ဆိုင် ထားတဲ့ တက်သစ်စ ဆက်ဆီ မော်ဒယ်လ် စတယ်လာ ကို သိကြမယ် ထင်ပါ တယ်။ ဆွဲမက်ဖွယ် ရင်သပ် ရှုမောစရာ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေး တွေနဲ့ ပုရိသတွေ ရဲ့ ရင်ကို ဆွဲဆောင် ညို့ယူ ထားတဲ့ အလန်းစား